किन ‘नेगेटिभ’ हुन्छ हाम्रो दिमाग ?::Hamro Koshi Awaj / awaz
किन ‘नेगेटिभ’ हुन्छ हाम्रो दिमाग ?
धरानः दैनिक जीवनमा हामीले कहिले प्रशंसा पाउँछौँ त कहिले आलोचना । तर, हाम्रो दिमागमा प्रशंसा भन्दा पनि आलोचना अर्थात् नकारात्मक कुराले बढी स्थान पाइरहेको हुन्छ । हाम्रो दिमागमा सकरात्मकता भन्दा पनि बढी नकारात्मकताले ठाउँ लिएको हुन्छ । यसको प्रमुख कारण हाम्रो दिमागले टिप्पणी गर्ने नकारात्मक विषयप्रतिको बढी फोकस हो ।
जति आनन्द हामी आफ्नो प्रशंसा सुन्नमा पाउँछौं त्यो भन्दा हामीलाई नकारात्मक टिप्पणीले असर गर्छ । यस्ता कुराले दिमागमा लामो समयसम्म कब्जा गरेर बसेको हुन्छ । यसैकारण पनि कतिपय अवस्थामा पहिलो भेटमै भेटेका मानिसहरूसँग लामो समयसम्म पनि नकारात्मकता नै बढेको हुन्छ ।
यो हाम्रो प्रकृति नै हो की हामी बढी पीडादायक घटना र बेइज्जतीलाई सम्झन्छौं । हामी छिटो नेगेटीभिटीमा रियाक्ट गर्छौं । बढी नेगेटीभ कुरालाई सोच्छौ ।
उदाहरणको लागि हामी जब कुनै बेला झगडा गर्छौं तब हामी दिन नै खराब भएको ठान्छौं । हामी त्यसअघि र पछिका जती मिठा पल भएपनि ती सबै बिर्सिएर झगडाकै कुरामा बढी केन्द्रित हुन्छौं ।
एक अध्ययनअनुसार, नकरात्मक कुरा हाम्रो मस्तिष्कमा अझ बढी समय रहन्छ । सकारात्मकलाई भन्दा पनि बढी हामी नकारात्मक विषयलाई मूल्यांकन गर्न थाल्छौं । नराम्रा कुरा हाम्रो दिमागमा बढी रहन्छ ।
कसरी हटाउने नकारात्मक विचार ?
नकारात्मकताले हाम्रो मानसिक स्वास्थमा असर पर्छ । यसकारण पनि सकारात्मक विचार ल्याउनु महत्वपूर्ण रहन्छ । नकरात्मक विचार हटाउन आफूलाई मन पर्ने गीत सुन्ने, केही समय एक्लै हिँड्ने, किताब पढ्ने, कमेडी फिल्म वा भिडियो हेर्ने गर्नुपर्छ ।
कुलुङले जनगणना २०७८ मा के लेख्ने ?
नेकपा विवादको जड यस्तो !
यौनिकतालाई इज्जतसँग तुलना कहिलेसम्म ?
भावनात्मक बुद्धिमत्ताको आवश्यकता
अन्ततः सकारात्मक सोंचले सफल !
बालबालिका पूर्णस्वतन्त्र त छैनन् ?